Najanon'ny Fitsarana Avo Etazonia izao ny baikon'ny vaksiny federaly
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Najanon'ny Fitsarana Avo Etazonia izao ny baikon'ny vaksiny federaly
Novambra 6, 2021
Namoaka fijanonana vonjimaika ny Fitsarana Avo Amerikanina ho an'ny boriborintany fahadimy androany, nampiato ny didy aman-dalàna momba ny vaksiny federaly nataon'ny fitantanan'i Biden ho an'ireo mpampiasa manana mpiasa 100 mahery. Ny First Liberty Institute dia nanao fanangonan-tsonia tamin'ny Circuit fahadimy tamin'ny anaran'ny Daystar Television Network sy ny American Family Association mba hijery ilay mandat.
"Tsy miaina ao anatin'ny didy jadona izay ahafahan'ny filoha iray mamoaka didy sy maka ny orinasa lehibe rehetra eto amin'ny firenentsika sy ny fiainan'ny Amerikana maherin'ny 84 tapitrisa," hoy i Kelly Shackelford, Filoha, Tale Jeneralin'ny Tale Jeneralin'ny Lehiben'ny Mpanolotsaina Voalohany. Liberty Institute. “Tsy mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana ny mandat ary manitsakitsaka ny lalàm-panorenana ihany koa. Faly izahay fa najanon’ny boriborintany fahadimy tsy hampiharana izany”.
Ny fitsarana dia nilaza hoe: "Satria ny fanangonan-tsonia dia manome antony hinoana fa misy olana lehibe amin'ny lalàna sy ny lalàm-panorenana amin'ny Mandat, dia mijanona ny Mandat mandra-pisian'ity fitsarana ity."
Ny Daystar Television Network dia tambajotra iraisam-pirenena mifototra amin'ny finoana “natokana hanaparitahana ny Filazantsara 24 ora isan'andro, fito andro isan-kerinandro” ary ny America Family Association dia iray amin'ireo fikambanana lehibe indrindra manohana ny fianakaviana ao amin'ny firenena. Ny fikambanana tsirairay dia manana mpiasa maherin'ny 100, ka mahatonga azy ireo iharan'ny fepetra vaovao momba ny vaksiny.
Tamin'ny volana septambra, ny Filoha Biden dia nanome baiko ny Fitantanana ny fiarovana sy ny fahasalamana ("OSHA") mba hamoaka "fenitra vonjimaika vonjimaika" (ETS) federaly izay mitaky ny orinasa tsy miankina rehetra manana mpiasa 100 na mihoatra mba hiantohana fa ny mpiasa tsirairay dia manao vaksiny amin'ny COVID-19. virosy na mampiseho valim-panadinana ratsy isan-kerinandro na mety handoa onitra. Araka ny lalàna federaly, ny ETS dia tsy azo avoaka raha tsy rehefa "ilaina" ny fanaovana izany mba hiarovana ny mpiasa amin'ny "loza lehibe" amin'ny fiparitahan'ny "zavatra na mpiasa tapa-kevitra fa misy poizina na manimba ara-batana na avy amin'ny loza vaovao." Ny ETS dia vonjimaika ary tapitra aorian'ny enim-bolana, aorian'izay dia takiana ny masoivoho hamoaka fitsipika maharitra mifanaraka amin'ny fizotran'ny lalàna maharitra.